“Benzema si kasta ayuu ii caawiyay” – Vinícius Jr – Gool FM
(Real Madrid) 14 Feb 2019. Ciyaaryahanka kooxda Real Madrid Vinícius Júnior ayaa kaga mahad celiyay saaxiibkiis kula sugan kooxda sida uu wax walba ugu sameenayo inuu ka caawiyo si uu hormar u sameeyo.
Vinícius Júnior ayaa hadalkan sheegay kadib guushii ay xalay kaga gaareen kooxda Ajax kulankii lugta hore wareega 16-ka tartanka Vinícius Júnior, kaasoo ka dhacay garoonka Johan Cruijff ArenA.
Laacibka reer Brazil oo lahaa caawinta goolka koowaad ee ciyaarta kaasoo uu dhaliyay Karim Benzema ayaa kadib markii ay ciyaarta dhamaatay saxaafada kula dhex hadlay garoonka Johan Cruijff ArenA wuxuuna yiri:
“Benzema wuxuu si weyn ii caawinayaa tan iyo maalintii ugu horeysan ee aan imid kooxda Real Madrid, waxaan sameenayaa wax walba ee aan ku sameyn karo sida aan goolal ku caawin karo kuna dhalin karo”.
“Karim wuxuu wax walba u sameenayaa sida uu igaaga caawin lahaa inaan horumar sameeyo”.
“Wax badan ayaan ku dhibtoonay kulankan, laakiin waa inaan aqbalnaa dhibaatada si aan ugu guuleysano tartanka Champions League, kooxduna waxay diyaar u tahay tartankan, qeybta labaad ee ciyaarta aad ayay inoogu fiicneyd, waxa ugu muhimsan ayaa ah inaad guul gaarto”.